Izindaba - Ifilimu ebuyisa ngokujulile impi yaseChina ne-COVID-19 iphuma ekugcineni -Odokotela baseChina, kuzoba ngumpetha webhokisi lasehlobo summer
Ifilimu ebuyisa ngokujulile impi yaseChina ne-COVID-19 iphuma ekugcineni -Odokotela baseChina, kuzoba ngumpetha webhokisi lasehlobo summer
Ifilimu Odokotela BaseChina, ukuhlonishwa kwekhulu leminyaka lokusungulwa kwePhathi，ihlelelwe ukukhishwa ngoJulayi 8 kuleli hlobo.
Ukubuyiselwa kwephaneli komzabalazo onzima wokulwa ne-COVID-19, kuhlonipha "isihlubuki" esihle kakhulu esenziwe ngumqondisi weChinese Captain kanye nabalingisi bokuqala, uCaptain waseChina uzuze ama- $ 2.9 billion ebhokisini, kanti kulindeleke amaDokotela aseChina.
Odokotela baseChina (abaphakanyiswe ngu-Academician uZhong Nanshan)
UMnyango Kazwelonke Wenkulumo-ze wahola ukudubula Kwesekelwa yimali eyisipesheli yombuso。
Njengomsebenzi obalulekile woMnyango WePropaganda we-CPC kanye ne-State Film Administration, ifilimu ethi “Chinese Doctors” selibhekiwe futhi lahlonishwa kakhulu nguMnyango Wezinkulumo-ze we-CPC, yi-State Film Administration, yi-National Health Commission, yi-National Center Yokulawulwa Nokuvikelwa Kwezifo, iKhomishani Yezempilo Yesifundazwe iHubei, kanye neHubei Provincial Centre for Disease Control and Prevention.
Ukuze kubuyiswe le ndaba ethinta inhliziyo, iqembu elikhulu langena eWuhan ngokushesha nje lapho "lingavulwa" ekuqaleni kuka-Ephreli 2020, lapho baxhumana khona namakhulu ezisebenzi zezokwelapha ubuso nobuso futhi baqoqa inani elikhulu lolwazi oluyigugu lokuqala. izenzo zobuqhawe zenani elikhulu labasebenzi bezokwelapha zashaqisa iqembu lokudala.
U-Yu Dong, ophrojusa omkhulu wefilimu futhi ongusihlalo weBona Film Group, uthe: “I-Wuhan yidolobha lamaqhawe. Siyethemba ukuhlonipha leli dolobha elinobuqhawe kanye namaqhawe alwa nobhubhane aseChina ngemizwa yethu yangempela kanye nokuthwebula kwamakhamera. Abasunguli boDokotela baseChina bazodidiyela umoya omkhulu wokulwa nobhubhane “wokuphila kuqala, ubumbano lwesizwe, ukunikela ngempilo yomuntu ngenxa lokufa, ukuhlonishwa kwesayensi, kanye nokwabelana ngesiphetho esifanayo ”ekwakhiweni kwefilimu nokwakhiwa kwabalingiswa, nokuzala kabusha umoya omkhulu wenani elikhulu labasebenzi bezokwelapha bembethe izikhali ezimhlophe, bephuma behlehla, bezidela Impilo ngenhloso yokonga izimpilo. Ukwethula umsebenzi wobuciko ohambisa phambili umoya waseChina futhi uqinise amandla amaShayina kubabukeli jikelele! ”
Ukuqhamuka komhlaba jikelele kwe-COVID-19 ngo-2020 kuthinte wonke umuntu emhlabeni.Njengamandla amakhulu okuqala emhlabeni ukulawula ubhubhane, iChina nayo ifanele ukukhunjulwa ngendaba.
I-Heart Galaxy Culture, umholi emkhakheni wokubhaliswa kwamalungelo efilimu! Ngeminyaka engu-5 yocwaningo olujulile embonini yokubhaliselwa kwamalungelo amafilimu namafilimu, inkampani ithatha ukubhaliswa kwephrojekthi yethelevishini nethelevishini njengethuba lokunikeza ipulatifomu elisemthethweni lamalungelo wokubhaliswa kwedatha ngebhokisi langempela ledatha.
Imininingwane ethe xaxa yamafilimu neyezezimali, wamukelekile ukuthi ungene kwiwebhusayithi yethu ukuze ubonisane.